Dearest Endimthandayo | FunDza
Dearest endimthandayo, ndibhala lo mbongo intliziyo yam isetempileni yesandla sakho. Ndibhala lombongo ndincwina ziintlungu nezivubeko zeziyolo ezityumze intliziyo yakho kanobom ezandleni zeempazamo zam.
Dearest endimthandayo, ndiba buyikrazula intliziyo yam ndibe buyitweza kananjalo…
Ndiba buyondlala suke ndibe buyisonga ndiyishwabanise ngenxa yokubetha-bethana kwemizwa yam.
Ngentlazane, ndikuthanda ukusuka nokuhlala ndikubhiyozela okomtha welanga ephuma elagcibeni…
Ngesidlo sasemini ndiphatha ndiyeka ngenxa yokonganyelwa yimpuphuma yothando endilubekele bucala, gu nje ndilungiselela imini yendlala.
Ngokuhlwa ndiphatha kugevezelelwa ngamadolo, ndibile ndithi xhopho lithontsi – ntsi lombilo onkcenkceza enqamleza kuchachazo lwam.
Dearest, endimthandayo… Ndiphatha ukukulangazelela ukuba ubesenkcamini nakwingqekembe yolwimi lwam khonukuze ungathi ndisovakalisa ukuba ndiyakuthanda uthi ngamampunge nalawo.
Ndiba kuba sis’tshothwarha, ndibe kuba bungqokolarha konke oku ngumlingo nobugqi ondehlelayo ndaakuzikhangela ndiziqonda ndikwazazi uhlobo nendlela endikuthanda ngayo owungasoze wayiqonda ngoba namazwi am aphuma ebubungcangcazelarha emlonyeni wam.
Dearest endimthandayo, ndibhala lo mbongo ngelokuncamela…ngelokugqibelisa ngoba noba sezikhatshelwe zaya edlelweni inkomo zosapho, sezingabonwa, zithe de qelele tyeke phaya, ithemba lokuba ziyobuya lihlala lihleli lingenogungqiswa ngumbho okanye umxesibe.
Dearest endimthandayo, ndiphatha kudlala uray-ray qash-qash, ndiphathe kukhwaza undize maqobo-qobo ndize ngendlela enzulileyo endiziva ngayo ngawe.
Ndibamba ndiyeka suke ndibeliyilo – nditshone ndivela, enyanisweni nanamhlanje ndisazibuza umnkqa wombuzo wabuyatha wakuba… Lade lathini ibali lalamfo wayeme eYoridane abanye bewela…?
Dearest endimthandayo ibangupuce, maxawambi ibengunochele indlela endiziva ngayo kusokuthi tha, umfanekiso oqingqiweyo gxebe osengqondweni wakho Kum.
Dearest endimthandayo, ndibethwa bubuyilo bobuciko, enyanisweni lilula eli bali…
Usisandi sentswahla yentaka zedlelo ezimhlophe zisusela.
Ulithamsanqa embindini nakumbhodamo wamashwa am.
Uliwonga, igugu, iqhayiya nentshinga.
Ungumthunzi wokuphumla. Isangxa somculo onzulileyo othazamileyo nondilisekileyo.
Ulithemba phakathi kombhodamo nodushe.
Uluphawo lothando nengqiniseko yokuba intliziyo nganye yadalelwa eyayo.
Nokuba ingumkhohlisi yona nalento ingumntu ingumsinto onyeke-nyeke…
Eyakho intliziyo yile ndiyithandayo.
Honey For The Honeyed
Mhmm... Nice one ❤️👌